Tubaakada”Khatarta heysata Jiilkeenna dahabiga ah” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Tubaakada”Khatarta heysata Jiilkeenna dahabiga ah”
Tubaakada”Khatarta heysata Jiilkeenna dahabiga ah”
4 illaa 5sano kahor waxa aad loo yaqaanay qaadka, sigaarka, badeecada oo shiishada ah, tubaakada iyo calaqa; balse waxaa ka dambeeyay oo dalka yimid maandooriye ka gedisan intaas oo dhan – qaab isticmaalka – kana fudud isla markaana ay qabatimeen in badan oo kamid ah jiilka aan looga baran maandooriyayaasha. Kuma cusuba maqalka dhagahaaga oo waxay ila tahay inaad maqashay maandooriyaha Taabuuga.
Majirto qof kamid ah dhallinyarada isticmaasha Taabuuga waxa kagag sheegi kara waxa ay ka helaan oo waxaa ka muqanaya xishood kamana sheekeyn. Taas beddelkeeda waxay ka dharagsan yahiin in ay tahay khalad isticmaalkiisa balse ay qabatimeen.
Qeybahiisa soo gaaray dalka waxaa kamid ah; Hot & Galaxy. Way kala duwan yiihin, qofba waa midka uu barto uuna qabatimo, inta badan waxaa loogu isticmaal badan yahay nooca la yiraahdo Galaxy. Nuucan asal waa uu qiimo sarreeyay balse waxaa hadda yimid isaga oo lasoo dhimay sida ay sheegayaan ganacsatada iibisaha Taabuuga ama tubaakada.
‘Waa ka saameyn badan yahay inta aad fileyso‘ waa hal-ku-dhegga ku qoran nooc kamid ah Taabuugasi Ama Tubaakada.
Hadal badan oo aan daal laheyn, Dhidid tiro badan, mararka qaar qofka oo maqane jooga noqda, fahamka ardeyga oo aad u yaraada, dhaq-dhaqaaq faro badan ama ficillo aan xakameysneyn iyo Astaamaha lagu garan karo isticmaalayaasha Taabuuga Ama Maandooriyaha Tubaakada.
Khatarta caafimaad ee Taabuugu leeyahay Ama Tubaakada.
Waxaa qoray Fardowsa Sheik Abdirahman
Previous articleAl-Shabaab oo mar kale Qarxiyay Masjid ku yaala Degmada Hodan
Next articleDuqa Muqdisho oo Cambaareeyay weerarkii naftii halignimada ahaa ee argagixisada ay ka geysteen degmada Hodan